Uyini umthetho we-CAN-SPAM? | Martech Zone
Imithethonqubo yase-United States emboza imilayezo ye-imeyili yezentengiselwano yalawulwa ngonyaka we-2003 ngaphansi kwe Umthetho we-Federal Trade Commission ka-CAN-SPAM. Yize sekuphele iminyaka eyishumi… Ngisavula ibhokisi lokungenayo lami nsuku zonke kwi-imeyili engacelwanga enolwazi olungamanga futhi engenayo indlela yokuphuma. Angiqiniseki ukuthi imithethonqubo isebenze kanjani ngisho nokusongelwa kuze kube yinhlawulo engu- $ 16,000 ngokwephula ngakunye.
Kuyathakazelisa ukuthi umthetho we-CAN-SPAM awudingi imvume yokuthumela i-imeyili njengo imithetho yezwe yokuthengisa imiyalezo usungule. Okudingayo ukuthi umamukeli unelungelo lokuthi uyeke ukuthumela i-imeyili. Lokhu kwaziwa njengendlela yokuphuma, evame ukunikezwa ngesixhumanisi sokuzikhipha ohlwini esifakwe kunyaweni we-imeyili.
Lokhu Umhlahlandlela wabaqalayo ku-CAN-SPAM Act kusuka ku-EverCloud izokunikeza lonke ulwazi odinga ukulwazi ukuqinisekisa ukuthi ugcina umthetho.
Izidingo Eziyinhloko Zomthetho we-CAN-SPAM:
Ungasebenzisi ulwazi lweheda olungamanga noma oludukisayo. Igama lakho elithi “From,” “To,” “Reply-To,” kanye nemizila yokuhambisa imininingwane - kufaka phakathi igama lesizinda eliqhamukayo kanye nekheli le-imeyili - kufanele libe neqiniso futhi likhombe umuntu noma ibhizinisi eliqale umyalezo.
Ungasebenzisi imigqa yezihloko ekhohlisayo. Umugqa wesihloko kufanele ukuveze ngokunembile okuqukethwe umlayezo.
Khomba umlayezo njengesikhangiso. Umthetho ukukunikeza inkululeko eningi yokuthi ungakwenza kanjani lokhu, kepha kufanele ukudalule ngokusobala nangokugqamile ukuthi umyalezo wakho uyisikhangiso.
Tshela abamukeli lapho ukhona. Umlayezo wakho kufanele ufake ikheli lakho leposi elivumelekile. Leli kungaba ikheli lakho lomgwaqo wamanje, ibhokisi leposi olibhalise ne-US Postal Service, noma ibhokisi leposi langasese olibhalisile ne-ejensi yokuthola imeyili ethengiswayo esungulwe ngaphansi kwemithetho ye-Postal Service.
Tshela abamukeli ukuthi bangakhetha kanjani ukuthola i-imeyili ezayo evela kuwe. Umlayezo wakho kufanele ufake incazelo ecacile nebonakalayo yokuthi umamukeli angakhetha kanjani ukuthola i-imeyili evela kuwe ngokuzayo. Yenza isaziso ngendlela elula kumuntu ojwayelekile ukuyibona, ayifunde, futhi ayiqonde. Ukusetshenziswa kobuciko kohlobo losayizi, umbala, nendawo kungathuthukisa ukucaca. Nikeza ikheli le-imeyili elibuyayo noma enye indlela elula esekwe kwi-Intanethi yokuvumela abantu ukuthi baxhumane nezinqumo zabo kuwe. Ungakha imenyu ukuvumela umamukeli ukuthi akhethe ukuphuma ezinhlotsheni ezithile zemiyalezo, kepha kufanele ufake inketho yokumisa yonke imilayezo yezentengiso evela kuwe. Qiniseka ukuthi isihlungi sakho sogaxekile asivimbeli lezi zicelo zokuphuma.
Hlonipha izicelo zokuphuma ngokushesha. Noma iyiphi indlela yokuphuma oyinikezayo kufanele ikwazi ukucubungula izicelo zokukhetha ukuphuma okungenani izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuthumela umlayezo wakho. Kufanele uhloniphe isicelo sokuphuma somamukeli zingakapheli izinsuku eziyi-10 zebhizinisi. Awukwazi ukukhokhisa imali, udinga ukuthi umamukeli akunikeze noma yiluphi ulwazi olukhomba yena uqobo ngaphandle kwekheli le-imeyili, noma wenze umamukeli athathe noma yisiphi isinyathelo ngaphandle kokuthumela i-imeyili yokuphendula noma ukuvakashela ikhasi elilodwa kuwebhusayithi ye-Intanethi njengesimo sokuhlonipha isicelo sokuphuma. Lapho abantu bekutshele ukuthi abafuni ukuthola eminye imilayezo evela kuwe, awukwazi ukuthengisa noma ukudlulisa amakheli abo e-imeyili, noma ngabe kungohlu lwamakheli. Okuwukuphela kokuhlukile ukuthi ungadlulisela amakheli enkampanini oyiqashile ukukusiza ukuhambisana nomthetho we-CAN-SPAM.
Bheka ukuthi abanye benzelani wena. Umthetho ukubeka kucace ukuthi noma ngabe uqasha enye inkampani ezokuphatha ukumaketha kwakho nge-imeyili, awukwazi ukukhipha umthwalo wakho osemthethweni wokulandela umthetho. Kokubili inkampani ekhiqizelwa umkhiqizo wayo emyalezweni kanye nenkampani ethumela umyalezo empeleni ingabanjwa ngokusemthethweni.
Ukuqinisekisa ukuthi uhambisana nemithetho ye-CAN-SPAM yisinyathelo sokuqala sokuthola ama-imeyili akho ngokuhlunga i-imeyili kanye nakwibhokisi lokungenayo lababhalisile. Ukuhambisana ne-CAN-SPAM akusho ukuthi i-imeyili yakho izofika ebhokisini lokungenayo, noma kunjalo! Ungaqhubeka uvinjelwe futhi uvinjelwe, noma uthunyelwe ngqo kufolda engenamsoco ngokuya ngokuhanjiswa kwakho, idumela lakho, nokubekwa kwakho ebhokisini lokungenayo. Uzodinga ithuluzi lomuntu wesithathu elifana ne- 250ok ngalokho!
Tags: kungaba isenzo sogaxekilei-can-spamimiyalezo yezentengisoikhomishini yezohweboftcukuphumaisihlungi sogaxekileizinhlawulo zogaxekileama-imeyili aphathekayoisevisi yeposiyini isenzo se-can-spam